. တော်တီလာ နှင့် သူ၏ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » . တော်တီလာ နှင့် သူ၏ …	4
. တော်တီလာ နှင့် သူ၏ …
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 23, 2015 in Food, Drink & Recipes |4comments
ဒီတစ်ခါတော့ ပိုပြီး လွယ် တဲ့ စားစရာ တစ်မျိုး ကို ရှု “စား” နိုင်ဖို့ ပြပါမယ်။
.တော်တီလာ (Tortilla) လို့ ခေါ်တဲ့ ဂျုံပြားလေး ပေါ်မှာ အစာ တွေ ထည့်ပြီး လိပ်ထား တာပါ။
Wrap လို့လဲ ခေါ်ကြပါတယ်။
အခု လုပ်ထားတာ က မက္ကဆီကန် ပုံစံ ပါ။
. မြန်မာပြည် မှာတော့ Tortilla Wrap အတွက် Ingredients တွေ ရနိုင်မလားတော့ မသိဘူး။
– ကြက် ရင်ပုံအကြီး နှစ်ခု (လေးထောင့်၊ အရှည် ကြိုက်သလို လှီးထား)
– Tortilla အမှုန့်ထုတ်
– ပန်း ငရုတ် အနီ အပွ တစ်တောင့် (လေးထောင့်၊ အရှည် ကြိုက်သလို လှီးထား)
– ကြက်သွန်နီ အလတ် တစ်လုံး / တစ်ဥ (လေးထောင့်၊ အရှည် ကြိုက်သလို လှီးထား)
– သံလွင်ဆီ (သို့) ပဲဆီ တစ်ဇွန်း
– Tortilla Wrap ၄ ချပ်
မချက် ခင်မှာ ကြက်သားကို Tortilla အမှုန့် နဲ့ နယ်ပြီး တစ်နာရီလောက် ထားပါ။
(Tortilla Wrap မရှိရင် ချာပါတီ အရွက် ကို လဲ သုံးနိုင်တယ်။ အရသာ ဆင်တယ်။)
(Tortilla အမှုန့် မရှိ ရင် မဆလာထည့်ကြည့်ပေါ့) :-)))
အိုးထဲ ဆီထည့် ပြီး ဆီပူ လာရင် ကြက်သားထည့်။ ညိုလာရင် ကြက်သွန် နဲ့ ပန်းငရုတ် ထည့်။ မွှေ ပြီး စိတ်ကြိုက် အနေ ရရင် အအေးခံပါ။
ဒယ်ပြားကို အပူတိုက်ပြီး ပူလာရင် ဂျုံပြား ကို တစ်ဘက် မိနစ်ဝက် လောက် ကင်ပါ။
ဂျုံရွက် ပေါ်ကို Mayonnaise သုတ်ပါ။ ဆလပ်ရွက် ထည့်ပါ။ ကြက်သားဟင်း ထည့်ပါ။
လိပ်ပြီး Tortilla Chips အကြော် နဲ့ တွဲစား နိုင်ပါပြီ။ (Tortilla Chips က ready made ဝယ်ထားတာပါ)
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒါမိုး ဆို ချာပါတီလို အိုးကင်းကပ်ပြီး အာလူးချက်နဲ့ပဲ လုပ်စားချင်။
Mike says: .ပုံတွေလည်းမြင်ရဘု Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဇီကလေး နဲ့ မိုက်။
အရီးလဲ ကုလားချာပါတီ ကို ဘဲ ပိုကြိုက်တယ်။ :-)))
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ့ဒါ စားရဖို့ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်မယ်ဆိုရင်
တစ်ရက်စာ လုပ်အားခနဲ့တောင် စားရမယ် မထင်